Midika ho fiverenan’ny voronkely tiana ny lohataona ao Japan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2018 12:21 GMT
Vakio amin'ny teny русский, বাংলা, नेपाली, Italiano, Español, Français, English
voronkely mpitelina ao amin'ny garan'i Umeda, Osaka. Avy amin'ny mpisera Flickr muzina_shanghai. Lisansa: CC BY-NC-ND 2.0
Isaky ny lohataona no andraisan'i Japan ny fiverenan'ny famonin'ny serizy (voarohy), fahavokaram-bary, ny fielin'ny vovombony [mg] — ary ny voronkely mpitelina eny an-tsompitra. Vahiny tonga soa eny amin'ny gara, sekoly, andohalambon'ny fivarotana na aiza na aiza azon-dry zareo ananganana akany ny voronkely mpitelina an-tsompitra.
Ho fanamarihana ny fanombohan'ny lohataona, nanangona ireo karazan-tsioka fiarahabana ireo voronkely mpitelina tonga soa niverina ao Japan isaky ny volana avrily isan-taona ny Fundo, tranonkala japoney iray mpamory ireo sary-sy-soratra an'aterineto.
— とりっぴー -小鳥用品専門店- (@bird_torippie) April 28, 2018
Marika: Tonga soa indray ry mpitelina!
Sioka: Tadiavinay ny hananganan'ny voronkely mpitelina akany, ary rehefa nametraka ity akany ity izahay ary namorona ity afisy ity, dia azo itokisana, nanapakevitra ny (hikotrika) hanorina akany ry zareo! Am-panorenana akanim-borona iray eo anilan'ny fidirana ny fivarotanay ny mpitelina, ka raha sendra mijanona eo ianao, dia mba itodiho ihany ry zareo!
Vorona mpifindramonina mpandeha asara (andro mafana) any Filipina, Vietnam, Malayzia, Indonezia ary ny firenenkafa ny mpitelina an-tsompitra (Hirundo rustica, fantatra ho ‘tsubame’ amin'ny teny japoney) mialoha ny hiverenan-dry zareo ao Japan isaky ny Aprily (hikotrika) hanorina akany. Tazamason'ny mpandeha fitateram-bahoaka ireo vorona ireo:
— jin_ishii@JK (@jin_ishiiJK) April 27, 2018
Eto amin'ny garan'i Tobu Tojo Shinrinkōen aho amin'izao fotoana izao. Hita indray ho eo am-panorenana ny akaniny amin'ity taona ity ry mpitelina.🐦
Koa satria moa hita hanorina akany na aiza na aiza eto Japan ny mpitelina, dia misy ny fikarakarana manokana hiarovana ireo mpandalo tsy ho tratran'ny zavatra alatsany:
【多摩市ニュース】 駅のツバメの巣の下にフン受け板を設置します – PR TIMES (プレスリリース) https://t.co/keIb4Crn9x pic.twitter.com/DYnnQdBJmt
— 多摩市ニュース (@tamacitynews) April 12, 2017
(Tama City News) Sehatra iray navelatra ambanin'ny akanim-borona iray hitatazana izay alatsany (ao amin'ny garan'i Keio Wakabadai).
Sary: “Hafatra avy amin'ny mpitelina eto amin'ny garan'i Kori, Okutama.” avy amin'ny mpisera Flickr Hajime NAKANO. CC BY 2.0
(dikantsoratra) Avy amin'ny mpitelina mponin'ny garan'i Kori: “Ho eo ambany fikarakaranareo indray izahay amin'ity taona ity. Raha mety hahasorena ny fiavelanay, dia manantena izahay fa tsy horaharahianareo izany mandra-piverinay indray any an-tanindrazanay any atsimo.”
Tsy masiaka ireo vorona ireo ary matetika mampiseho ny tsi-fatahorany ireo olombelona mpampiatrano:
— マグナムSY (@SY11750198) April 19, 2018
E ry mpitelina a! Misy olombelona eto! Nahoana ianareo no tsy mandositra, tpt? Efa zatra anay olombelona ihany koa ianareo! 💦💦
Fohy ihany ny fotoana itoeran'ny mpitelina miaraka amin'ny olombelona. Alohan'ny farany volana mey, efa saika mandao ny akaniny avokoa ireo vao foy:
— オオハクチョウ@潮来 (@swallow_swan248) May 29, 2014
Tsy handre intsony ny fikiririokan'ny mpitelina aho. Omaly teny an-dalana ho any an-tsekoly aho nahita mpitelina nandao ny akaniny. vorona vao foy enina no nahomby tamin'ny fisidinana handeha lavitra…mahalasa sento!
— あんこ (@benkyusinasaine) April 12, 2017
Mitondra hafaliana lehibe ireny vorona ireny. Te-hikarakara fatratra azy ireny aho